Maamule dugsi oo la xiray ka dib markii ay barteeda Whatsap-ka ku daabacday warqadaha imtixaanka qaran ee KCSE-da | Star FM
Home Wararka Kenya Maamule dugsi oo la xiray ka dib markii ay barteeda Whatsap-ka ku...
Maamule dugsi oo la xiray ka dib markii ay barteeda Whatsap-ka ku daabacday warqadaha imtixaanka qaran ee KCSE-da
Betta Mutuku, oo ah maamulaha dugsiga sare ee ABC Kiseveni ee ismaamulka Machakos ayaa la xiray ka dib markii ay barteeda Whatsapp-ka ku daabacday warqadda maadada xisaabta ee imtixaanka qaran ee fasalka afaraad ee dugsiga sare ee KCSE-da.
Saraakiisha booliska oo ay hoggaminayso taliyaha Machakos Rhodah Kanyi ayaa tagay dugsiga xilli uu socday imtixaanka waxayna goobta ka wadeen maamulaha iskuulka si su’aalo loo weydiiyo.
Ms. Mutuku ayaa la sheegay inay warqadda ku daabacday barta WhatsApp-ka fiidnimadii Isniinta si ay ardayda u darsaan ka hor subaxa talaadada oo ay u fadhiisanayeen.
Maamulaha ayaa laga qaaday taleefoonkeeda gacanta waxaana hadda lagu billaabay baaritaan.
Previous articleDHAGEYSO:Isku duwaha ammaanka ee Rift Valley oo sheegay in berri howlgal amni laga billaabaya Baringo
Next articleWaaxda saadaasha hawada oo sheegtay in toddobaadka dambe roobab la filayo